"सम्मान जनक मत आउनेमा ढुक्क छौं"
HOME » "सम्मान जनक मत आउनेमा ढुक्क छौं"
डिसी नेपाल , १ कार्तिक २०७४
सम्मान जनक मत आउनेमा ढुक्क छौं,
समशेर बहादुर बस्नेत, रामेछाप प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार
राप्रपा सुरुमा स्थापना हुँदा पञ्चायतकाल हस्तिहरुद्धारा २०४७ सालमा स्थापना भएको हो । विभिन्न उतारचढाव, टुटफुट पारगर्दै आजको दिनमा तीन वटा पार्टी अस्तित्वमा रहेका छन् । नेतृत्व भने पञ्चायतमै सक्रिय नेताहरुले गरिरहेका छन् । राप्रपा कमल थापा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) पशुपति समशेर जवरा र ए राप्रपा (राष्ट्रवादी) डा. प्रकाश चन्द्र लोहनीले गरिरहेका छन् । राप्रपा स्थापना भएदेखि नै सक्रिय राजनीतिमा आएका बस्नेत भने हाल ए राप्रपा (राष्ट्रवादी ) मा सक्रिय छन् । हुन त उनको बुबा दिलबहादुर बस्नेत पनि सामाजिक ,राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय थिए । २००७ साल ताका नेपाली काँग्रेसकै योद्धा थिए । पछि पञ्चायतको राजनीतिमा सक्रिय हुनु भयो । मैले राजनीतिक,सामाजिक आन्दोलनमा लाग्ने प्रेरणा बुबा बाटै पाएं ।
बि.स. २०२९देखि २०४८ सालसम्म नेपाल प्रहरीमा जागिर खाएं । बुबाले नै जागिर छाड्न भनिसकेपछि जागिर छाडे, त्यही वर्ष बुबा बित्नु भयो । त्यसपछि निरन्तर राप्रपाको राजनीतिमा रहें । राप्रपा(हलो) पशुपतिसमशेर जवरासँग निरन्तरसँगै रहें । २०५४ सालको स्थानिय निकाय निर्वाचनमा रामेछाप वाम्ती भण्डार वडा नं. १ को वडा अध्यक्षमा बिजयी भएं ।
सबैलाई फेरी एकपटक स्मरण रहोस्, २०५९ सालमा त्यही कुरा अन्र्तगत ठुलो पहिरो गयो । धेरै जनाको ज्यान गयो,जग्गा जमिन बगायो, धेरै परिवार स्थापित भए । हाम्रो परिवार, दाजुभाईहरुको जग्गा जमिन सहित ज्यानै गयो । त्यसबेलादेखि हामी पनि बिस्थापित भएर काठमाडौं आयौं । त्यही बेला जनताले राहत ढिला भएको बिषयमा वडा अध्यक्ष वडाअध्यक्षको हैसियतले आवाज उठाउँदा नेपाली सेनाले मलाई चौविस घण्टा नियन्त्रणमा लियो । मेरो पहिलेदेखि नै अवस्था अनुसार मिलनसार र कडा स्वभाव दुवै थियो । म जनताको कानमा सधै सक्रिय हुन्थे र आजसम्म पनि जनपक्षीय काम गर्दै आएको छु ।
राप्रपा पशुपति समशेर जवरासँग रहँदा केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरें ।
सात महिना अगाडि राप्रपा नेपाल,कमल थापाको एकता भएपछि मुख्यतः जिल्लाकै राजनीतिमा सक्रिय रहें । यसरी प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टी एकता भएको केही दिनमै नेतृत्वको गलत रबैयाको फेहरिष्ट सहित पार्टी छाडे । ए राप्रपा (राष्ट्रवादी) गठनसँगै म यही पार्टीमा सक्रिय भएर लागि रहेको छु । म पहिलेदेखि नै बौद्धिकतासँग प्रभावित थिएं । पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र रामेछाप जिल्ला अध्यक्ष समेत भएर काम गरिरहेको छु । साथै आउँदै गरेको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा रामेछापबाट चुनाव लड्दै छु । रामेछापमा हाम्रो पार्टी र मेरो पक्षमा राम्रो जनमत छ । वडा अध्यक्ष समेत जितेर काम गरिसकेको हुनाले म परिचित उम्मेदवार पनि हुँ । अहिले विभिन्न खाले गठबन्धनहरु देखा परेका छन्,हामी कुनैपनि गठबन्धनको पक्षमा छैनौ । हाम्रो पार्टी एक्लै चुनावमा भाग लिने निर्णय गरिसकेका छौं । जनताले हामीलाई सम्मान जनक मत दिनेमा ढुक्क छौं ।